२०७७ भदौ ३१ बुधबार ०४:१०:००
‘हामीमाथि अत्याचार भयो । जसरी हुन्छ मुक्त गर्न पहल गरिदिनूस् । कहाँ गएर बोल्न पर्छ बोलिदिनूस्, लेखिदिनूस्,’ दुई महिनादेखि अस्पतालमा बन्धक रहेका शिवचन्द्र सदा र उनकी श्रीमती मिलियादेवीले रुँदै अनुरोध गरेपछि नयाँ पत्रिकाले सरोकारवाला सबै संयन्त्रलाई सम्पर्क गर्यो । थाहा लाग्यो– सदा परिवारमाथि अत्याचार भयो भन्नेमा सबै जानकार छन् । तर, उनीहरूले सार्थक पहल के गरे ? विस्तृत रिपोर्ट
सप्तरीको महुलीमा दुई महिनाअघि निर्घात कुटिएका थिए दलितदम्पती । उनीहरूलाई कुट्ने तारेखमा छुटेका छन् र समाजमा छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् । कुटाइ खानेहरू भने दुई महिनादेखि विराटनगरको गोल्डेन हस्पिटलमा छन्, किनकि घाउचोटको उपचारको पैसा तिर्न नसकेको भनेर अस्पतालले बन्धक बनाएको छ । विपन्न र बेखर्ची यी दम्पती अन्य बिरामीका आफन्तले दिएको खाना खाएर अस्पतालमा दिन कटाइरहेका छन् ।
अरूको दयामा आफ्नो ज्यान बचेको छ, तर छोराछोरीको के हालत भयो होला ? सम्झिएर मलियादेवी आफैँ भयभीत हुन्छिन् । ‘हामीमाथि त कहर छुट्यो, मान्छेले दगुराएर अस्पताल ल्याए, तीनजना बच्चा छन्, बालबच्चा के गर्दै होलान्, के खाँदै होलान्, घरमा खानेकुरा केही थिएन,’ उनले भनिन् ।
देशमा नागरिक सरकार छ, तर त्यो कति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार छ ? यो एउटा उदाहरण हो । दोषीले उन्मुक्ति पाएका छन्, न्यायबाट विमुख गरिएका दलित नागरिकलाई अपमानित गरेर अस्पतालमा बन्धक बनाइएको छ । यो विषय प्रदेश १ र २ का सरकारलाई थाहा नभएको पनि होइन । पीडित दलित परिवारको नाममा दुवैतिरका सरकारले सामाजिक सञ्जालमा ठुल्ठूला घोषणा गरेका छन् । तर, वास्तविकता के हो भनेर अनुगमन गरेका छैनन् ।
गाउँमा स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले केही त पहल गरिरहेको होला भन्ने अपेक्षामा हामीले गाउँपालिका अध्यक्ष पर्शुराम चौधरीलाई सम्पर्क ग¥यौँ । तर, आफ्नै गाउँको एउटा दम्पती अस्पतालमा दुई महिनादेखि बन्धक भएको र छोराछोरीको बिचल्ली भएको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । मंगलबार राति नै उनीसँग यस्तो संवाद भयो ।
अध्यक्षज्यू, तपाईंकै गाउँपालिकाका बासिन्दा शिवचन्द्र सदा र मिलिया सदा कुटपिटबाट घाइते भएर दुई महिनाअघि अस्पताल भर्ना भएका थिए, उनीहरू उपचार खर्च तिर्न नसकेर अहिले विराटनगरमा बन्धक छन्, उनीहरूलाई न्याय र राहत दिन गाउँपालिकाले के पहल गरेको छ ?
– गाउँपालिकालाई कसले भन्यो र अहिलेसम्म ?
सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै आयो, तपाईं त जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यकर्ताबाट पनि थाहा पाउनुभएन ?
घटना हुँदा मलाई कसैले भनेन । सीधै थाना गयो । मुद्दा गर्न गएपछि म के गर्नु ?
तर, सदादम्पतीलाई आर्थिक सहयोग गर्न भनेर तपाईंकै गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको छ अनि अध्यक्षलाई नै थाहा छैन ?
नियमअनुसार निवेदन आएपछि आर्थिक सहयोगको सिफारिस गरेको होला । तर, गाउँपालिकामा पीडितले जानकारी गराएको छैन । कुनै समन्वय पनि गरेको छैन ।
तर, तपार्इंकै गाउँपालिकाको जनता औषधि–उपचार खर्च तिर्न नसकेर बन्धक छन्, उनीहरूलाई मुक्त गर्ने पहल गर्नु तपाईंको दायित्व होइन ? यसमा पनि राजनीति गर्ने हो र ?
यो कुरा तपाईंले थानामा गएर भन्नुभएन ? मेरो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन आएको भए म केही गर्थेँ । नेताहरूले उनीहरूलाई कहाँ–कहाँ लिएर गए त म के गर्नु । गाउँपालिका कहाँ–कहाँ जान्छ ।
तर, गाउँपालिका अध्यक्ष त त्यहाँका जनताको अभिभावक हो, आफ्नो जनता अप्ठ्यारोमा पर्दा जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नुपर्ने होइन र ?
गाउँपालिकामा पनि निवेदन नै हालेको छैन । फेरि कुटपिट गर्ने व्यक्ति पक्राउ परिसकेपछि कानुनी हिसाबले ऊबाट क्षतिपूर्ति तिराउने हो नि । कुटपिटबाट घाइते व्यक्तिका लागि गाउँपालिकाले आफ्नो ढुकुटीबाट पैसा खर्च गरेर कसरी ल्याउँछ ? क्षतिपूर्तिबाट तिराउने हो नि !
क्षतिपूर्ति तिराउन के पहल गर्नुभयो ?
त्यो त कानुनले गर्दै होला नि ! थानामा बुझ्नुस् ।
गाउँपालिका अध्यक्षसँगको नमिठो संवादपछि हामीले इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर सप्तरीका डिएसपी नरेशकुमार सिंहलाई सम्पर्क ग¥यौँ । क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी पीडकमाथि कारबाही किन अघि नबढाएको ? त्यत्रो कुटपिट हुँदा पनि अभद्र व्यवहार मात्र भनेर मुद्दा किन कमजोर बनाएको भनेर हामीले उनीसँग जिज्ञासा राख्यौँ । उनले चोट जस्तोसुकै लागेको भए पनि ज्यान मार्ने उद्देश्य नदेखिएकाले अभद्र व्यवहारमा मात्र कारबाही चलाएको बताए । ‘घाउ जाँचबाट ज्यान मार्ने उद्देश्य देखिएन, त्यही भएर हामीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘घटनाको भोलिपल्ट नै ६ साउनमा हामीले अभियुक्त दिना साहलाई पक्राउ गरेका थियौँ । तर, साउन ३२ गते सरकारी वकिल कार्यालयको आदेशमा उनी रिहा भएका छन् ।’
तर, सरकारी वकिलले घटनामा संलग्न दिना साहकी पत्नीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले उनलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन । ‘सरकारी वकिल कार्यालयले त निर्देशन दिएकै हो, तर मुद्दाको मिसिल बुझाएपछि सिडिओसा’बले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि मात्र पक्राउ गर्ने हो, सिडिओसा’बबाट त्यस्तो आदेश आएको छैन,’ उनले भने ।
प्रहरीले सिडिओलाई देखाएपछि हामीले सप्तरीका सिडिओ शंकरहरि आचार्यलाई सम्पर्क ग¥यौँ । शिवचन्द्र सदादम्पती अहिलेसम्म अस्पतालमा किन बन्धक छ ? पीडितमाथि किन यस्तो अत्याचार भइरहेको छ ? कानुनी र मानवीय रूपमा पनि यो अपराध होइन र ? नयाँ पत्रिकाले जिज्ञासा राख्दा सिडिओ आचार्य झसंग भए । ‘होइन, उनीहरू अहिलेसम्म मुक्त भएका छैनन् र ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
छैनन्, अस्पतालमा उनीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइसके भनेर जानकारी दिँदा उनले भने, ‘मैले त गाउँपालिका उपाध्यक्षजीसँग कुरा गर्दा १० दिनअघि नै दुवै पक्षलाई राखेर कुरा गर्दै छु भन्दै थिए । मैले त उनीहरू मुक्त भइसके होलान् भन्ने ठानेको थिएँ ।’
मुद्दाको फाइल प्रहरीबाट सिडिओकहाँ आएको छ, बीचमा अरू कसले कसरी मिलाउँछ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘होइन, आरोपीलाई मैले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हुँ, उनकी श्रीमतीलाई पनि पक्राउ गरेपछि धरौटी माग्ने र क्षतिपूर्ति भराउने तयारी गरेको छु । केही दिनअघि प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई म स्वयंले फोन गरेर पीडित दम्पतीलाई अस्पतालबाट छुटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको थिएँ । तर, उनीहरू अझै अस्पतालमै रहेको थाहा पाउँदा म त झसंग भएँ ।’
सप्तरीका सिडिओले प्रदेश १ का आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्कीलाई फोन गरेको बताए । दुईवटा प्रदेशका सरकार लाग्दा पनि सदादम्पती किन छुटेनन् ? हामीले मन्त्री कार्कीलाई पनि सम्पर्क ग¥यौँ । उनले सदाको परिवारमाथि अमानवीय अत्याचार भएको थाहा पाएपछि छुटाउन आपूmले मोरङ र सप्तरीका सिडिओलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘तर, अहिलेसम्म उनीहरू बन्धक नै छन् भन्ने थाहा पाउँदा म त आश्चर्यचकित भएँ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।
उनले सदा परिवार अस्पतालको बन्धक हुनु र सरकारी कार्यालयबाट छुटाउन पहल नहुनु खेदजनक भएको टिप्पणी पनि गरे । ‘मैले सरकारी कार्यालय मात्र होइन, अस्पताल सञ्चालकसँग कुरा गरेर पीडितले जति पैसा तिर्न सक्छ लिएर उहाँहरूलाई छोडिदिनुस् भनेको थिएँ । नदिएको पैसा म आफैँ व्यक्तिगत रूपमा भए पनि तिर्छु भन्ने वचन दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि नागरिकले पैसा नभएर मर्नुपर्ने, पैसा नभएर अस्पतालमै बन्धक बन्नुपर्ने ? मैले सप्तरीका सिडिओसा’बलाई पनि भनेको थिएँ, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको यो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य खेदजनक हो । उहाँहरूले सक्नुभएन भने मलाई भनेको भए हुन्थ्यो, यो ठूलो अन्याय हो । तपाईंहरू पहल गर्नुस् भनेर मैले मोरङका सिडिओसा’बलाई पनि भनेको थिएँ, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म मुक्त गराउन सक्नुभएको रहनेछ । ’
जनता घुमाउने सरकारी काइदा कत्ति पनि रोचक थिएन । तैपनि पीडित परिवारको न्यायका लागि हामी सबै अड्डा पछ्याउँदै गयौँ । अब आश्चर्य पर्ने अवसर थियो मोरङका सिडिओ कोषहरि निरौलाको । उनले पनि यो मौका गुमाएनन् । ‘होइन, उनीहरू अहिलेसम्म छुटेका छैनन् ?’ उनले भने, ‘सप्तरीका सिडिओसा’बसँग पनि समन्वय गरेको थिएँ । उहाँले पत्र नै लेखेर मुक्त गराउँछु भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म गर्नुभएको रहेनछ है,’ उनको भनाइ थियो ।
अब फेरि घुमेर सप्तरीको सिडिओमा जानुपर्ने अवस्था आयो, जहाँबाट यो यात्रा समाप्त हुन्थ्यो । त्यसैले आशालाई जीवित राख्न हामीले खोज्यौँ प्रदेश २ सरकार । मधेसमा भएको दमन र अत्याचारविरुद्ध जनतालाई आन्दोलित गरेर शक्ति आर्जन गरेको दलको सरकार छ । फेरि केही दिनअघि सदादम्पतीका आफन्तले न्याय र औषधि–उपचार खर्चका लागि गत ८ भदौमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीलाई लिखित निवेदन दिएको समाचार पनि आएको थियो ।
दलितमाथि अत्याचार रोक्न मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको बैठक गत १७ भदौमा बसेको थियो । बैठकले विभिन्न निर्णय गर्दै विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेको परिवारलाई एक लाख ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको जानकारी दिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ट्विट नै गरेका थिए । यो ट्विटपछि उनलाई न्यायप्रेमी मुख्यमन्त्री भनेर प्रशंसाको बाढी लागेको थियो । तर दुई सातासम्म पनि पैसा आएन । जब कि पीडित परिवार अस्पतालमा मिनेट–मिनेट गनेर बसेको छ । तिनका छोराछोरी घरमा बाबुआमाको प्रतीक्षामा छन् ।
मुख्यमन्त्रीको ट्विटमा आएको रकम कहाँ रोकियो ? नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत श्यामसुन्दर महतोले मंगलबार साँझ भने, ‘उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मुख्यसचिवबाट प्रमाणित गरेपछि मात्रै रकम निकासा हुन्छ । यो प्रक्रियामा छ ।’ यसरी नागरिक बन्धक भएर अस्पतालमा विचलित हुँदा पनि सरकार दुई महिनादेखि फाइलमाथि फाइल बनाउने प्रक्रियामा छ ।
यो यस्तो वास्तविकता हो, जसले गरीवी, राज्य संयन्त्रबीचको असमन्वय, धनबलका अगाडि नतमस्तक प्रहरी प्रशासन, समाजको अमानवीय चरित्र र नागरिकको स्वास्थ्यमाथि हुने कारोवारको सोचको एकैसाथ उजागार गरेको छ ।
#बन्धक दम्पती # सप्तरी
कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीका एक पुरुषको धरानमा निधन
मालपोत कार्यालय सप्तरीका नासु घुससहित पक्राउ
सिराहा र सप्तरीका २१ सांसदका मठमन्दिरसम्बन्धी ९४ योजना, साढे आठ करोड खर्च गरिँदै